“Waxa Jirtay In Goobtii Aan Shirka Ka Fadhiyay La Sudhay Magaca Iyo Calanka Somaliland, Halka Wasiirrada Kale & Madaxda Dalalka Kaleba Uu Horyaalay Magaca Dalalkooda Oo Aan Calan Lahayn” Wasiirka Caafimaadka – somalilandtoday.com
“Waxa Jirtay In Goobtii Aan Shirka Ka Fadhiyay La Sudhay Magaca Iyo Calanka Somaliland, Halka Wasiirrada Kale & Madaxda Dalalka Kaleba Uu Horyaalay Magaca Dalalkooda Oo Aan Calan Lahayn” Wasiirka Caafimaadka
(SLT-Hargeysa)-Wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Somaliland Dr. Xasan Ismaaciil Yuusuf iyo wetfi uu hoggaaminayay oo safar ugu maqnaa dalka Mosambik ayaa khamiistii dib ugu soo laabtay caasimadda Hargeysa. Xubnaha uu horkacayay Wasiirka caafimaadku ayaa dalka Mosambik kaga qaybgalay shir caalamiya oo lagaga arrinsanayay sidii dalalka Afrika isaga kaashan lahaayeen cudurada faaha.
Wasiirka horumarinta caafimaadka Somaliland Dr. Xasan Ismaaciil Yuusuf oo ka hadlaya ujeedada safarkooda ayaa yidhi; “shirka aannu ka qaybgalnay waxa uu ahaa shir sanadkiiba ama labadii sanaba mar la qabto. Waxa lagaga wadahadlay xanuunada faaha ama dilaaca ee isaga gudba waddamada iyo sidii looga hortagi lahaa ama hadday dhacaanba wax looga qaban lahaa si degega.” Ayuu yidhi wasiirku
Wasiir Xasan Ismaaciil Yuusuf waxa uu sheegay in Somaliland si rasmiya loogu soo casuumay shirkaasi, isla markaana loogu soo dhaweeyay isaga iyo weftigiisaba sida uu sheegay meqaam sare oo xataa ay jireen waxyaabo uu kaga duwanaa wufuudii kale ee dalalka kale ka soctay, oo uu gaar u xusay, wasiirku isagoo ka hadlayana waxa uu yidhi; “Innaga ka Somaliland ahaan, si rasmiya ayaa la innoogu soo casuumay, in ka badan Afartan waddan baa yimid, hay’addo badan oo caalamiya baa yimid, wasiirradana waxa joogay ilaa soddon wasiir oo wasiirradii caafimaadka ah. Weftigaygan aan hoggaaminayay anigoo wasiirkii caafimaadka ah, si heer sare ah baa la noo soo dhaweeyay. Waxa jirtay in goobtii aan shirka ka fadhiyay la sudhay calanka Somaliland iyo magacaba, halka wasiirrada kale ama madaxda dalalka kale uu horyaalay magaca dalalkooda, oo aannu calan lahayn.”
Waxa uu wasiirku sheegay in ka wasaarad caafimaad ahaan ay Somaliland dhinaceeda u soo saxeexeen heshiis ku aadan iskaashiga qaarada Afrika ee cudurada dilaaca, waxaana isagoo ka hadlaya uu yidhi; “dhinaca caafimaadka waxa aannu soo saxeexnay heshiis ah in Afrika iska kaashato xanuunada dilaaca.” Waxyaabaha aannu la kulnay intii aannu joognay waxa ka mid ahaa, waddan yar oo Lezota la yidhaahdo oo South Afrika ku dhex jira oo wasiirka caafimaadka oo gabadh yar ahi ay ka socotay iyo gabadh iyaduna ah wasiirka caafimaadka dalka Muzambik, dhammaantoodna waannu casuunay waanay naga aqbaleen, iyagoo leh ma sugi karayno intaanu Somaliland tagayno, waxa aannu sidanay dastuurka Somaliland luuqada Ingiriisiga ku qoran, oo aannu tusnay una qaybinay madaxda, annagoo in badana wada sheekaysanay, ugana warannay dalka Somaliland.”
Geesta kale Wasiirka wasaaradda caafimaadka Somaliland Dr. Xasan Ismaaciil Yuusuf waxa uu ka hadlay sida loogu socdaalo, isla markaana meel kasta loogu tagi karo baassaboorka Somaliland iyo sida qaarada Afrika u xiisanayso la macaamilka jamhuuriyadda Somaliland. “Waxa aan ku tegay baassaboorka Somaliland ee dublamaasiga ahaa, fiisihii Muzambik ayaa madaarka la iigaga dhuftay. Waxaan ku boorin lahaa dhammaan wasiirrada saaxiibbaday ah, si baasaboorkeenna loo barto inay qaataan, oo kolay baassaboorro kale ayaa hoosta lagu wada haystaa oo aniguba mid Ingiriis ah baan haystaa, laakiin bari hore ayaa iigu dambaysay, keygaa Somaliland-ta ayaan ku baxaa meelksatana ku tagaa.” Ayuu yidhi Wasiirka horumarinta caafimaadka Somaliland Dr. Xasan Ismaaciil Yuusuf